Dadweynaha Hargeysa Oo Saaka Ku Waaberiistay Dayaanka Rasaas Dhimasho Iyo Dhaawac Sababtay | Araweelo News Network (Archive) -
Dadweynaha Hargeysa Oo Saaka Ku Waaberiistay Dayaanka Rasaas Dhimasho Iyo Dhaawac Sababtay
Hargeysa(ANN)Dadweynaha Magaalada Hargeysa ayaa saaka ku waaberiistay Rasaas xoog baddan oo sawaxanka iyo dayaankeedu dad baddan ka toosiyay hurdada, taas oo bilaabantay waxyar ka dib markii laga
soo baxay salaadii subax.
Dad goob joog ah ayaa u sheegay Araweelonews inay rasaastu bilaabantay. Kadib markii ciidmada Milateriga oo ku sugnaa goob dhul laysku haystay oo deegaanka Koonfur Bari ee Magaalada Hargeysa duleedka Wersheda Kabista oo xerro ciidan ah ay soo weerareen malayshiyo ku muransanayd dhulkaa, balse la doonayay in laga saaro, taas oo sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Ma jiraan warar faahfaahsan oo ilaa hada kasoo baxay rabshadaa iyo inta uu leegyahay baaxada khasaaruhu, balse saraakiisha Cusbitaalka Guud ee hargeysa ayaa u sheegay Araweelonews in la keenay Maydka laba qof oo Nin iyo Qof Dumara. Sidoo kalena lasoo gaadhsiiyay Cusbitaalka sadex qof oo dhaawac ah, balse waxa jira warar sheegaya in khasaaruhu intaa ka badanyahay, iyadoo weli aanay xaaladu deganayn, isla markaana la maqlayo dhawaaqa rasaasta ka socota goobtaa.
Wixii war ah ee kasoo kordha kala soco Araweelonews.com